Al-Shabaab oo shaaciyey inay 74 ruux ku dileen weerarkii Nairobi | Goojacade
Home War Al-Shabaab oo shaaciyey inay 74 ruux ku dileen weerarkii Nairobi
Al-Shabaab oo shaaciyey inay 74 ruux ku dileen weerarkii Nairobi
Kooxda Al-Shabaab ayaa soo saartay tiro cusub oo ah khasaraaha dhimasho ee ay sheegtay inuu ka dhashay weerarkii ay talaadii ku qaadday xarunta DusitD2 ee magaalada Nairobi.
Al-Shabaab oo markii hore sheegtay in 47 qof ay weerarka ku dishay ayaa waxaa hadda warbaahintooda ay werinayaan in dhimashada ay tahay 74 qof.
Warbaahinta Al-Shabaab ayaa arrintan caddeyn uga dhigay in 21 qof ay qirteen Kenyan-ka, sidoo kalena hay’adda Laanqayrta Cas ay shaacisay in 50 qof la la’yahay, halka meydadka 3 qof oo dheeri ah la helay.
“Macluumaadkan cusub ee soo baxaya islamarkaana cadeynaya in dhimashadu ka badan tahay 50 qof ayaa fadeexad ku ah Uhuru Kenyatta oo shalay warbaahinta u sheegay in weerarka lagu dilay 14 qof” ayaa lagu yiri qoraalka warbaahinta Al-Shabaab.
Al-Shabaab waxa ay sidoo kale sheegtay in saraakiil caddaan oo Reer Galbeed ah iyo ciidamada la dagaallanka argagixisada ay gudaha ugu jiraan goobta weerarku ka dhacay, si ay u qariyaan, bay tiri, xaqiiqda.
Previous articleCabdiraxmaan Cirro: Haddii labo Xisbi gaar u tashadaan waa la kala tashan doonaa
Next articleBoqor Buur Madow Somaliland dhaqaalihii waa ka xiran yahay ee dimoqraadiyadana yaan laga xidhin